Archive du 20190211
Demokrasia eto Madagasikara Tena miha tery
Manoloana ny toe-draharaha politika ankehitriny dia nivoaka tamin’ny fahanginany ny antoko politika DHD na dina maha olona sy demokrasia eto Madagasikara, tamin’ny alalan’ny filohany Harinaivo Rasamoelina.
Vondrona Afrikanina Mieritreritra hanavao ny rafi-pitantanana
Nanomboka omaly alahady 10 febroary 2019 any Addis Abeba Etiopia ary mifarana anio ny fihaonambe faha-32 ho an’ny Vondrona Afrikanina, ka mitarika ny delegasionina Malagasy any an-toerana ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina.
Fanakianana an-dRajoelina Manomboka ny fanagadrana
Raikitra ny fanagadrana ireo olona manaratsy na manakiana ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina, ka olona mpivady no indray nidoboka vonjimaika eny Antanimora ny herinandro teo. Fampiharana ny lalàna mikasika ny heloka amin’ny “internet” sy ny tambajotran-tserasera na ny “cybercriminalité” no antony.
Fampihavanana ny mpanao politika Fandaniam-potoana fotsiny, hoy i Dany Rakotoson
Mbola misy 4 taona vao hifarana ny taom-piasan’ilay komitin’ny fampihavanana Malagasy na ny CFM.
Fampielezana horonantsary sy sary mamoafady Mampitandrina ny rehetra ny fanjakana
Miha mahazo vahana amin`ny haino aman-jery sasantsasany sy any anaty tambajotra sosialy ny horonantsary na sary voasokajy ho mamoafady miendrika vetaveta na koa mitarika amina fihetsika tsy voahevitra, ary koa tsy manaja ny soatoavina Malagasy.
Mpandevina tra-doza Olona 9 no naratra mafy
Mpandevina sivy no naratra mafy. Io no vokatry ny loza tamin’ny fiara roa nifandona, afak’omaly atoandro, araka ny loharanom-baovaon’ny Borigadin’ny Zandarmaria Ambohidratrimo.
Fampivoarana ny kitra malagasy Hatao isan-taona ny M’foot fokontany
Araka ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny Alefa Barea tetsy amin’ny Dome Akorondrano dia hotontosaina isan-taona manomboka amin’ity taona ity ny fifaninanana baolina kitra ho
Fitantanana disadisa eo amin’ny firenena Ambany ny tahan’ny vehivavy eto Madagasikara
Raha ny eto Madagasikara manokana dia mbola ambany hatrany ny fandraisan’anjara ataon’ny vehivavy ny amin’ny fitantanana disadisa mihoatra ny amin’ireo firenena afrikanina hafa.